Iikhamera ze-IP | Iikhamera ze-LPR | IiKhamera ze-4G ze-PTZ eziphathekayo kunye neebhetri
Ikhamera ye-4G LTE
Ikhamera yokuThintela yokuTshisa
Ikhamera engaphantsi kwamanzi
Ikhamera yokuSebenza esebenzayo
Ikhamera ye-PTZ ende yoSondeza
IP Ngaphezulu kweCoax
I-LoRaWAN IiNzwa ezingenantambo
Umlawuli wenethiwekhi ye-IO
RS485 kwiNethiwekhi Converter
Ilifu leNayota LPR
Ilifu le-Nayota IoT
Isisombululo seFama eSmart
Isisombululo sokuhambisa i-IP
Inkxaso kunye nokukhuphela
Abathengi abonwabileyo abavela kumazwe angaphezu kwe-100
Ngaphezulu kweminyaka eli-13 yobungcali kwiVidiyo nakwishishini le-IOT
Yonwabela inkxaso yethu yeeyure ezingama-24 kunye nokubonisana
Ileyibheli yabucala kunye nenkonzo yokumiselwa kwesiko
Ingcali yevidiyo engenazingcingo + kunye nezisombululo ze-IoT
Yasekwa ngonyaka ka-2007, iLinovision iyazingca ekuyileni nasekwenziweni kwevidiyo engenazingcingo + kwiimveliso ze-IoT. Ngobungcali kwiikhamera zenethiwekhi ze-AI, i-port ye-IoT yokulawula ilifu, iitekhnoloji zokuhambisa ngaphandle kwamacingo, iisistim zamandla elanga, izisombululo zethu ezihlanganiswe ngokupheleleyo zezona zisombululo zinokukhuphisana kwaye ziguquguqukayo kwimarike. Sikwabonelela nge-24hr ngenkxaso yobuchwephesha kunye nenkonzo yokubonisana nenkqubo evela kumaqela ethu e-China nase-USA. Masidibanise kunye ukuxhobisa ishishini lakho ngoku!
I-LoRaWAN engenazingcingo yeNqanaba laManzi laManzi ...
Umzi mveliso we-4G LTE we-AT & T Certifi ...
Isango le-IoT eVumbeneyo yoLawulo oluBanzi ...
Ibhokisi ye-LPR ye-Nayota LPR Cloud
I-PoE IP ngaphaya kwesiGuquli seCoax sokuGqithisela aMandla ...
Ikhamera yenethiwekhi ye-4MP ye-AI emnyama-yokulwa.
I-4G LTE inethiwekhi ephathekayo yangaphandle PTZ
Ikhamera ye-4G LTE engenazingcingo ye-IR PTZ ene-360 ° ...
Thatha kwaye uqaphele iipleyiti zelayisensi kwaye uzilayishe kwiLifu
Iikhamera ze-LPR (Ukwamkelwa kweLayisenisi yeLayisenisi) iikhamera okanye i-ANPR (iAutomatic Plate Recognition) iikhamera zisetyenziswa kakhulu ekungeneni / ekuphumeni, kwiindawo zokupaka kunye nokugcwala kwendlela ukubamba nokwazisa iipleyiti zelayisensi.
Iikhamera zangaphantsi kwamanzi
Fumana ividiyo ye-HD bukhoma kumanzi aphantsi kwamanzi
Isisombululo sekhamera engaphantsi kwamanzi siyilelwe ngokukodwa iifama zasemanzini, ezinemathiriyeli engenasici engama-316L, ukutyabeka okungafaniyo nokubola kunye nenqanaba eli-10 lokulawula ukukhanya. Uyilo lwee-LEDs kunye nobuchwephesha bokuqhubekeka kwemifanekiso buqinisekisa inkcazo ephezulu yevidiyo nakwindawo enodaka phantsi kwamanzi.
Iintlobo ngeentlobo zezinzwa ezingenazingcingo ezinebhetri yobomi obude
I-Linovision ibonelela ngomgca opheleleyo we-LoRaWAN sensors ezingenantambo kunye ne-IOT Edge Box eyahlukileyo ngomboniso we-HDMI wasekhaya.
Ngomhla kaJulayi 20, 20
Iindidi: I-LINO ANPR (Ikhamera yeNombolo eZenzekelayo yeNombolo) yenzelwe ukubamba kunye nokuqonda ipleyiti yelayisensi kwaye emva koko idityaniswe ne-smart NVR, isoftware yeVMS okanye inkqubo yolawulo lokupaka ...
Izigaba: Inkqubo yokuhanjiswa kwe-IP ye-LINO idlala indima ebaluleke kakhulu kwinkqubo yokujonga ividiyo ye-IP, ngelixa uninzi lwezixhobo zisebenza nge-TCP / IP. Kukho imiceli mngeni emibini exhaphakileyo kubantu abaninzi ...
Iindidi: LINO Wamkelekile! Enkosi ngokundwendwela iwebhusayithi yethu. Apha kwi-LINO, ndingathanda ufumane iimveliso ezinomdla, kwaye okubaluleke ngakumbi, kukufumana iqela elithembekileyo nelingcali onoku ...
Bhalisa kuluhlu lwethu lokuposa ukuze ufumane ulwazi malunga nokufika okutsha
I-Linovision inebhongo lokukhokela isisombululo seVidiyo engenazingcingo kunye nezisombululo ze-IoT.
Kwikomkhulu eHangzhou, China
IOfisi / yokugcina indlu eDallas, eMelika